तपाईंको कार्य समय-विचार र सुझावहरू राम्रो व्यवस्थापन गर्नुहोस्
द्वारा पोस्ट गरिएको Tranquillus | जनवरी 20, 2018 | व्यावसायिक विकास
तपाईको कामको समय व्यवस्थापन गर्नुहोस्
काम अक्सर एक कथा हो! कसरी सुरू गर्न, र विशेष गरी कहाँ सुरू गर्न सकिन्छ? एक प्रश्न जो मार्क हिट ... हाम्रो समाज मा एक बढ्दो समस्या जहां काम गति र उत्पादकता संग rhymes।
एक कर्मचारी वा कम्पनी प्रबन्धकको रूपमा चाहे, हामी सबैलाई कसरी काम गर्ने समयको प्रबन्ध र प्राथमिकता कसरी जान्छ। यो प्रक्रिया हाम्रो दैनिक कार्य सफलता र हाम्रो दीर्घकालीन परियोजनाहरूको सफलता दुवैमा एक महत्वपूर्ण कदम हो।
आफ्नो कामको समय व्यवस्थापन गर्न सबै कुञ्जीहरू सिक्न चाहनुहुन्छ?3मिनेटको यो भिडियोको लागि धन्यबाद, तपाई आफैले आफैले काम गर्ने प्रतीक्षामा सरल तर ठोस सल्लाह खोज्नुहुनेछ!
काम मा उत्पादकता को इक्का बनें। तपाइँ यसको बारेमा सोच्नु भएन? यी सुझावहरू पछ्याएर, तपाईंले देख्नुहुनेछ कि तपाईंको व्यावसायिक जीवन परिवर्तन हुनेछ।
यस भिडीयोमा, तपाईंले विचारहरू र सुझावहरू पाउनुहुनेछ जुन तपाईंलाई एक प्रभावशाली कार्यकर्ता बनाउनेछ ... र सबैले, केवल5बिन्दुमा:
1) ईफोकस हुनुहोस् एकाग्रता, एक अनिवार्य आधार।
2) प्राथमिकताहरू : के तपाईं सँग धेरै कार्यहरू गर्न चाहनुहुन्छ? यो व्यवस्थित र तिनीहरूलाई प्राथमिकता दिन सिक्ने बारे सबै हो ...
3) थाहा छैन कि कसरी भन्न सकिन्छ : एक जटिल विषय, तर तपाईंको काम को प्रबंधन मा आवश्यक छ।
4) विच्छेद : एक ब्रेक जुन तपाइँको सबै परियोजनाहरु लाई हटाउन सक्छ!
5) टिप्पणीहरू लिनुहोस् : एक आदत राम्रो व्यवस्थित गर्न को लागी।
त्यसोभए राम्ररी काम गर्न तयार छ?
तपाईंको कार्य समय-विचार र सुझावहरू राम्रो व्यवस्थापन गर्नुहोस् मई 11th, 2018Tranquillus
रिड विषाक्त काम वातावरण: कसरी बाहिर जान्छ?
अघिल्लोविफलता पछि सफल भयो
निम्नमाथिल्लो शीर्ष स्रोतहरू अंग्रेजी सिक्नका लागि
सफल कौशल मूल्याङ्कनका लागि7युक्तिहरू
तपाईंको कमजोरीहरू कसरी बलियो बनाउने?
एक लामो अभाव पछि काम गर्न सफल फिर्ता